The New Humanitarian | Mengistu extradition request
Mengistu extradition request
South Africa said on Monday it was reviewing a request from Ethiopia to extradite exiled former dictator Mengistu Haile Mariam to Addis Ababa to face trial on charges of genocide and crimes against humanity, news reports said.
Mengistu, currently undergoing medical treatment in South Africa, has lived in Zimbabwe since 1991 when he fled Ethiopia. He arrived in South Africa on a Zimbabwean diplomatic passport, and officials said they were considering a formal extradition request filed on Friday. Last week, a presidential spokesman in South Africa ruled out the possibility of deporting Mengistu,
saying there was no extradition treaty between South Africa and Ethiopia. Zimbabwe has given similar reasons in the past for allowing Mengistu to remain.